Su'aal: Cudurka OCD daawadiisu effective ma tahay?
Author Topic: Su'aal: Cudurka OCD daawadiisu effective ma tahay? (Read 395 times)
« on: December 21, 2018, 08:08:50 AM »
Asc Dr allaha Ina sharfo shaqada fican ee umada u haysaan , cudurka OCD daawadiisu effective ma tahay oo xanuunka ma tagsiinaysaa ,Tan labaad daaawada SSRI side effectska OCD ay ku ku yeelan karto le,ekaan karaa.
Re: Su'aal: Cudurka OCD daawadiisu effective ma tahay?
« Reply #1 on: April 22, 2019, 08:09:26 PM »
Daawada waxtarkeeda waxay ku xiran tahay xanuunka heerka uu gaarsiisan yahay, muddada uu ku haayay, nuuca ku hayo iyo inay cillado kale la socdaan waa muhim inaad dhakhtar cilladaha maskaxda la xiriirtaa si uu tala kaaga siiyo. faahfaahinta xanuunkaan, astaamihiisa iyo siyaabaha loola tacaalo ka akhriso qoraalkaan: http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=3700.0